YouTube: Etu esi enye ndi ulo oru gi ma obu ndi ihe nlere na onye nnata na uzo gi | Martech Zone
YouTube: Etu esi enye ndi ulo oru gi ma obu ndi na-ese foto ya na onye nweta uzo gi
Ọzọkwa, mụ na ụlọ ọrụ na -ahapụ ụlọ ọrụ na -arụkọ ọrụ ebuli ọnụnọ YouTube ha… Na, ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ ha na -arụ ọrụ nwere nwe akaụntụ ha niile. Anọ m na -eme mkpesa banyere ụlọ ọrụ na -eme nke a ihe karịrị afọ iri ugbu a ma na -adụ ndị ahịa ọdụ ka ha ghara ime nke a. Azụmaahịa ekwesịghịkwa inye nbanye na paswọọdụ iji jikwaa akaụntụ ọ bụla.
Appropriatezọ kwesịrị ekwesị iji rụọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla bụ iji atụmatụ ọrụ nke isi nyiwe niile, site na ndị na-edebanye aha ngalaba, ndị ọrụ weebụ, gaa na ntanetị mmekọrịta iji nye gị ụlọ ọrụ nnweta njikwa mana ọ nweghị ohere ịgba ụgwọ na ịnweta. Ọ bụrụ na ịmeghị, enwere ohere mgbe niile na ụlọ ọrụ gị na gị na -ese okwu ma ọ na -esiri gị ike ịlaghachi azụ ma ọ bụ nweta ụlọ ọrụ gị ọzọ. Ma ọ bụ nke ka njọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye ndụmọdụ gị na gị na -arụkọ ọrụ nwere ike ịpụ ahịa ma ọ bụ ghara ịdị mgbe ịchọrọ ya. Ekwela ka azụmahịa gị dị ka nke a!
Taa, a ga m ejere gị ozi ka ị ga -esi nweta ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ onye na -ese vidiyo na ọwa YouTube gị site na ịgbakwunye ha dị ka onye njikwa akara gị na Google.
Etu esi agbakwunye njikwa na YouTube
Google ejiri nwayọ na-emepe ihu na nhọrọ na ọrụ ha niile ebe ị nwere ike ịnweta akaụntụ ika wee tinye ndị ọrụ n'okpuru akaụntụ ahụ nke na-enye ha ohere pere mpe. Uru nke a dị mfe:
Ị naghị enye nnabata na okwuntughe na ịdabere na ụlọ ọrụ gị iji chebe ha.
Ị dịghị mgbe inye nwe na ụlọ ọrụ gị, yabụ na enweghị nsogbu ma ọ bụrụ na ị kpebie ịpụ. Naanị banye ma wepu ohere ha dị ka onye njikwa.
Agencylọ ọrụ gị nwere nwere oke ịnweta jikwaa akaụntụ ahụ, na-enweghị ike ịnweta atụmatụ ha ekwesịghị inwe dị ka ịgba ụgwọ, njikwa ọrụ, ma ọ bụ nwe.
Nzọụkwụ Addgbakwunye Agencylọ Ọrụ ma ọ bụ Onye Na-ese foto iji Jikwaa YouTube Channel gị
Open YouTube Studio ma pịa ntọala na ala nke menu aka ekpe.
Họrọ ikike na gị Settings NchNhr ma pịa Jikwaa nnyefe. Nwere ike ịbanye na akaụntụ gị ebe a ka Google nwee ike gosipụta na ị bụ onye nwe ya.
Ugbu a ị nọ n'akụkụ gị nkọwa akaụntụ brand ma họrọ jikwaa ikikere maka ndị ọrụ gị.
N'elu aka nri, pinye akara ngosi na Kpọọ Ndị Ọrụ Ọhụrụ.
Tinye Ndị Ọrụ Ọhụrụ ga - enyere gị aka tinye adreesị ozi-e yana ọrụ ha maka akaụntụ gị. Nkwado m maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ vidiyo ga-agbakwunye ha dị ka manager.
Ọ bụ ya… ugbu a onye ọrụ gị ga -enweta ọkwa email ebe ha nwere ike nabata ọrụ ha wee malite ijikwa ọwa YouTube gị!
Tags: tinye njikwa na youtubeika akaụntụgoogle ika akaụntụotújikwaa ikikere na youtubeyoutubeAkaụntụ YouTubeYouTube chanelNjikwa ọwa YouTubeahia ahia youtubeYouTube ikikeOnye ọrụ YouTubeYouTube ọrụ ikikere
Gịnị bụ Enterprise Tag Management? Gịnị Mere I Ji Kwesị Ime Ihe Nlekọta Njikwa?